Nezvedu - Uk Prudential Viwanda Co, Ltd.
UK YOKUDZIDZA INDUSTRY CO., LIMITED
UK Prudental Indasitiri yeboka iri muWales, izita-rakakurumbira mubatanidzwa une makore mazhinji nhoroondo. Icho chinangwa chedu kutsvaga hunyanzvi uye kuita. Zvigadzirwa zvedu zvinogona kushandiswa zvakanyanya muzvivakwa zveruzhinji zvemaguta, zvivakwa zvekutengesa nezvimwe. Hwedu hunyanzvi uye hwakasiyana hunogadzira hunogona kusangana nevakagadziri kuti vagadzirise chero akasarudzika ekugadzirisa mhinduro kuti vadudzire zvakadzama zvinoreva kuvaka uye nekuvapa iwo mikana isingaperi yekugadzira uye hunyanzvi. Iyo yedu bhizimusi rekuvandudza modhi yekunyatso kushandisa anoshanda-anotarisana, mhando-yakatarisana uye inoenderana nevanhu-inotungamirwa manejimendi. Sechikamu chemagariro ake, isu tinonyatsoziva zvakatipoteredza chinzvimbo chedu nebasa redu.
Isu tinoita zvinoenderana nebasa iri uye tinoita shuwa kuti tinogovana kukosha kwatinogadzira, muchiyero chakakodzera, nevatengi vedu, vashandi nevose vedu vatengesi. Mazuva ano tiri kushanda nesimba kuti tigadzire kukosha kwakasimba pamwe needu akavimbika uye ane ruzivo maChina shamwari. Prudential Boka rine huwandu hwezana remukati zvigadzirwa zvine kuenderera kumutsiridza. Ndokumbirawo usazeze kutaura nesu kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve zvigadzirwa zvedu, zvakadzama tekinoroji parameter uye sevhisi yedu. Vainyanzvi vedu vekutengesa vane ruzivo vari pabasa rako chero nguva.
Tiri nyanzvi pakuvaka chinosimbisa uye chisimbiso hurongwa, uye inorganic pendi.
Isu Tinobatsira Vatengi Kubudirira
Kudyidzana Go BeyondSpace
Prudential Kambani uye vanobatana navo muChina vakanyora chitsauko chekudyidzana kubva mukugadzirisa mashandiro ezvikamu kusvika mukubata zvizere mukugadzira yehurumende chivakwa bhaudhi system yePrudential uye yakadzamidzirwa chiteshi. Nhasi, anopfuura zviuru zvitatu zvemapurojekiti ekupedzisira anoshandisa zvinhu uye
magungano anogadzirwa muChina. Mune ramangwana, Prudential icharamba ichishanda neyakagadzirwa-inotungamirwa indasitiri yekugadzira muChina kuti isimbise yakachengeteka uye inoshanda zvakanyanya kuvaka bhaudhi system uye Cast-mune anchor chiteshi. Dai kudyidzana uku kukaenda kupfuura nguva nenzvimbo uye vatarisane neramangwana nekuzvipira kwedu kusingaperi.
Mamiriro Edu Emazuva Ano
UK Yakangwara Indasitiri Co, Ltd. ikambani inozivikanwa yeBritain yepasirese. UK Yakangwara Indasitiri Co, Ltd. kupa zvigadzirwa uye sevhisi kune anopfuura makumi mana nyika pasirese. Iri kushanda nekutarisira bhizinesi mune dzinopfuura nyika gumi neshanu, kuvaka mafekitori akabatanidzwa munyika nhanhatu uye kuve nemarabhoritari munyika ina.
Yakangwara kambani inopa mainjiniya pasi rese neakawanda technical technical service. Kuti ikubatsire kusarudza zvakakoshera zvidimbu, kambani yedu ichabatana pamwe neako anokudzwa mainjiniya timu padanho rekutanga reprojekiti dhizaini. Nekuita kwekutora chikamu, Prudential inogona kugara ichikubatsira iwe kusarudza kukamura zvidimbu zvakachengetedzeka uye zvine hupfumi. Prudential's engineering timu ichakushandira nekuvimbika kukuru uye nechido kungave muhofisi kana saiti yeprojekiti. Vakangwara vachapa rutsigiro ruzere kune yega yega chirongwa chako.
Global Logistics Chikwata
Prudential's Global Logistics Team sevhisi kuona kuti zvigadzirwa zvako zvichaendeswa kunzvimbo yekuvaka nenguva. Isu tinovavarira kukubatsira iwe kuita mabasa zvinoenderana neyako purogiramu pasina kunonoka. Kunyangwe kana emergency ikaitika, isu tinobva tachinjisa zvigadzirwa kubva kune yedu
padyo nenzvimbo, dunhu, kana nyowani imba yekuchengetera. Zvichakadaro, isu zvakare ticharega chero kuyedza kudzivirira kutengeswa kunodhura kana mari yendege.
Kunze kwezvedu zvakajairwa zvigadzirwa, isu zvakare tinopa chigadzirwa kugadziridza sevhisi kuti ikupe iwe zvigadzirwa zveakasiyana magadzirirwo.
Ndokumbirawo unzwe wakasununguka kubata mumiriri wemuno kuPrudential, kana iwe uine chaunoda.
Kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza Kuchenjera
Ndichiri kufambisa hunyanzvi, Prudential anoshingairira kukurudzira vashandi kuti vatore chikamu muchirongwa chekutanga chekuchengetedza nharaunda, zvinonzi "Kusvibisa Kudzivirira Mapurojekiti".